Pac မှာနောက်ကြမလား - MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life › Internet & Email ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
megalomanicboy June 2008 edited June 2008 in Internet & Email PAC မှာ (OR) LAN ချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ သုံးရင်းနဲ့ တစ်ခြားစက်မှာ ကိုယ့်အသိတစ်ယောက်တွေ့လို့ နောက်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်မလေးချောချောလေး တစ်ယောက်ကို လှမ်းနောက်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်စက်မှာ command prompt ကို run လိုက်ပါ။Start > run ကိုသွားပါcmd လို့ရိုက်ထည့်ပါ။cmd တက်လာရင် net send (ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ IP address) (ပို့ချင်တဲ့စာသား) ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ပြီးရင် enter ခေါက်ပါ။ဥပမာ net send 127.10.1.1 Your computer will be shutdown inaminuteတကယ်လို့ IP address မသိဘူးဆိုရင်တော့ wild card သုံးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ net send * Your computer will be shutdown inaminuteံHAVE FUN!!! မှတ်ချက်များ
nandy June 2008 edited June 2008 Registered Users ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်တယ်... နားမလည်လို့လား လုပ်တာမမှန်လို့လားမသိ... မရဘူးဗျ... ကယ်ပါဦး...:13: megalomanicboy June 2008 edited June 2008 Registered Users cmd တော့ run လို့ရတယ်မှုတ်လားC:\_Documents and Settings\_(Userရဲ့နာမည်)> ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒီမှာnet send * Hello လို့ရိုက်ထည့်ရင် ရှိသမျှ computer အားလုံး(ကိုယ့်computer ကလွဲပြီးတော့)မှာ Hello လို့ သွားပေါ်လိမ့်မယ်။C:\_Documents and Settings\_(Userရဲ့နာမည်)>net send * Hello Golden Moon June 2008 edited June 2008 Registered Users Nandy,Command ကတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ Service ထဲမှာ ကို Disable လုပ်ထားလို့ရှိရင်ပို့လို့မရဘူးလေ။ နှစ်ဖက်စလုံးက Enable လုပ်ထားမှရမှာ။ My Computer --> (Right Click) Manage --> Service and Application ---> Service --> Messenger (Double Click) and Enable လုပ်။ ပြီးရင် Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ရွှီးကြည့်တာနော်။ စမ်းကြည့်ပြီးရင် ပြန်ပြောဦး nandy June 2008 edited June 2008 Registered Users My Computer --> (Right Click) Manage --> Service and Application ---> Service --> ထိဘဲရတယ်......Messenger (Double Click) and Enable လုပ်။ ပြီးရင် Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။......Messenger ကစပြီး မတွေ့တော့ဘူး....စိတ်ရှည်ရှည်ထားကြပါနော်...မေးလွန်းလို့ မဖြေပဲနဲ့မနေကြပါနဲ့.... nandy June 2008 edited June 2008 Registered Users Enable တော့မတွေ့ဘူး...Disable & Manual &Automatic ရယ်အဲဒါဘဲတွေ့တယ်...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... layong June 2008 edited June 2008 Registered Users ကို nandy ရေ ကျွန်တော်ထင်တာ ဖေားကြည့်မယ်နော်။ .. disable & manual တို့ပဲတွေ့တယ်ဆိုတာ။ enable ဖြစ်ပြီးသားမို့များလား။ disable လေး အရင်လုပ်ကြည့်ပါလား။ အဲ့မှာ Enable ပေါ်လာမပေါ်လာပေါ့။ထင်တာလေး ပြောကြည့်တာပါ။ ကျွန်တော်လဲ မေးစရာရှိသေးတယ်။ :) yeman June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=megalomanicboy;7782]တကယ်လို့ IP address မသိဘူးဆိုရင်တော့ wild card သုံးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ net send * Your computer will be shutdown inaminuteံHAVE FUN!!!ကိုယ့်ဘေးနားက စက် IP address ကိုမသိရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သူစက်မှာ သွားဖွင့်ကြည့်လို့တော့ မပြောနဲ့နော် . . . :D wild card ကရောဘာလဲ။ သားမှ မသိတာကြီးကို၊ yeman June 2008 edited June 2008 Registered Users cmd ကိုမဖွင့်တော့ပဲ net send နဲ့တစ်ခါတည်း သုံးချင်ရင်တော့ အောက်က စာလေးတွေကို note pad နဲ့ ကူးပြီး .bat ဖိုင်နဲ့ သိမ်းလိုက်ပါ။ ဒါဆို အဲဒီဖိုင်ကို double click လုပ်ပြီး အဆင်သင့် သုံးလို့ရပါပြီ။ @echo offset/p y=Yourname;set/p n=To User Ip or Name;:Bset/p m=Message;@Echo You(%y%) are sending to %n%net send %n% %m%from %y%pauseclsgoto Bအဆင်မပြေရင်တော့ ထက်ပြောပေါ့ဗျာ . . .ခင်မင်လျှက်... layong June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=yeman;7860]ကိုယ့်ဘေးနားက စက် IP address ကိုမသိရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သူစက်မှာ သွားဖွင့်ကြည့်လို့တော့ မပြောနဲ့နော် . . . :D wild card ကရောဘာလဲ။ သားမှ မသိတာကြီးကို၊ကျွန်တော်သိတာတော့ Machine Name သိမယ်ဆိုရင်လဲ Machine Name ကိုလှမ်း ping ရင် ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုင်ဘာတွေမှာတော့ machine name (computer name) ကို နံပါတ်နဲ့ ပေးမယ်ထင်တယ်။ 1 , 2, စသဖြင့်ပေါ့နော်။ ထင်တာလေးပြောတာပါ။ သေသေချာချာတော့ မသိသေးပါခင်ဗျာ။.. ကျွန်တော်ထင်တာ မှန်းကြည့်ရင် wild card ဆိုတာကြီးက ကျချင်တဲ့စက်ကို msg က ကျမယ်ထင်တယ်။ စက်တွေထဲမှာ random ချပြီးပေါ့။မဟုတ်ရင်ပြင်ပေးပါခင်ဗျာ။ သင်ယူဆဲ layong June 2008 edited June 2008 Registered Users ကို yeman ရေ bat ဖိုင်တွေ့လို့သိချင်တာလေးမေးဦးမယ်။ run box ကို ပိတ်ထားရင်။ cmd ကို ပိတ်ထားရင်။ bat ဖိုင်ကနေပြန်ဖွင့်လို့ရသလားသိချင်လို့ပါ။ megalomanicboy June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=yeman;7861]cmd ကိုမဖွင့်တော့ပဲ net send နဲ့တစ်ခါတည်း သုံးချင်ရင်တော့ အောက်က စာလေးတွေကို note pad နဲ့ ကူးပြီး .bat ဖိုင်နဲ့ သိမ်းလိုက်ပါ။ ဒါဆို အဲဒီဖိုင်ကို double click လုပ်ပြီး အဆင်သင့် သုံးလို့ရပါပြီ။ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။လုံး၀ good တယ် mgminnyo June 2008 edited June 2008 Registered Users IP မြင်လို့၀င်ဖောလိုက်ဦးမယ်နော်..ဒီလိုပါ..မိမိသုံးနေတဲ့စက်ရဲ့ IP add ကိုတစ်ခြားစက်ကသိရင်..ဆော့၀ဲလ်လေးတစ်ခုသုံးပြီး၊အဲဒီဆော့၀ဲလ်ထဲကို IP add ထည့်ပြီး၊သူသုံးနေတာကိုခဏရပ်ခိုင်းပြီး၊ဒီဘက်ကနေသူစက်ကိုအားလုံးထိန်းချူပ်လို့ရတယ်...အဲဒါဘာဆော့၀ဲလ်ကိုသုံးတာပါလဲခင်ဗျာ..စာရိုက်တာကအစ တစ်ခြားစက်ကနေလှမ်းရိုက်လို့ရနေတယ်။ အသုံးပြုခံရနေတဲ့စက်ကိုသုံးနေတဲ့သူကတော့စက်ကိုမကိုင်ရဘူး။မောက်စ်ကိုချထားရပါတယ်။:39: exiter June 2008 edited June 2008 Administrators mgminnyo;7871 said:IP မြင်လို့၀င်ဖောလိုက်ဦးမယ်နော်..ဒီလိုပါ..မိမိသုံးနေတဲ့စက်ရဲ့ IP add ကိုတစ်ခြားစက်ကသိရင်..ဆော့၀ဲလ်လေးတစ်ခုသုံးပြီး၊အဲဒီဆော့၀ဲလ်ထဲကို IP add ထည့်ပြီး၊သူသုံးနေတာကိုခဏရပ်ခိုင်းပြီး၊ဒီဘက်ကနေသူစက်ကိုအားလုံးထိန်းချူပ်လို့ရတယ်...အဲဒါဘာဆော့၀ဲလ်ကိုသုံးတာပါလဲခင်ဗျာ..စာရိုက်တာကအစ တစ်ခြားစက်ကနေလှမ်းရိုက်လို့ရနေတယ်။ အသုံးပြုခံရနေတဲ့စက်ကိုသုံးနေတဲ့သူကတော့စက်ကိုမကိုင်ရဘူး။မောက်စ်ကိုချထားရပါတယ်။:39:
ရပါတယ်။အောက်မှာပေးထားတဲ့ software ကို download လုပ်ပြီးသုံးရင်ရပါတယ်။သုံးနည်းကတော့ program ကို install လုပ်ပြီး help file ကို ခေါ်ဖတ်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ။DOWNLOAD phyu pan khat June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=nandy;7821]Enable တော့မတွေ့ဘူး...Disable & Manual &Automatic ရယ်အဲဒါဘဲတွေ့တယ်...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...Automatic ကို ရွေး။ Apply ကို click လိုက်ရင် start button လေးက active ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့မှ start ကို click ။ အဲဒါမှ Enable ဖြစ်မှာပါ။ :1::1: စမ်းကြည့်ပေါ့နော်။ မရတော့ထပ်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ :D:D phyu pan khat June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=yeman;7860]ကိုယ့်ဘေးနားက စက် IP address ကိုမသိရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သူစက်မှာ သွားဖွင့်ကြည့်လို့တော့ မပြောနဲ့နော် . . . :D wild card ကရောဘာလဲ။ သားမှ မသိတာကြီးကို၊Wild Card က * လေ။ Find နဲ့ရှာတာတို့ဘာတို့ဆို file name အတိအကျမသိရင် *.mp3 တို့ ဘာတို့ နဲ့ရှာတယ်လေ။ သိတယ်မှတ်လား။ *.mp3 ဆို mp3 file တွေအကုန်ရတယ်လေ။ အဲဒီလိုပဲ net send * ဆိုရင် LAN ထဲမှာရှိသမျှ စက်တွေအကုန်လုံးဆီကိုရောက်သွားရော။ အဲဒါကိုပြောတာ။ :1::1: Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla